Fiakaran’ny vidin’ny PPN Avy any am-potony no mahatonga izany
Olana avy any am-potony no mahatonga ny fiakaran’ny vidin’ny entana ilaina andavanandro na ny PPN amin’ny ankapobeny, hoy ireo mpambongady nanaovana ny fanadihadiana.
Nambaran’izy ireo, fa antony mahatonga izany, ny fahatapahan’ny lalana, ka tara ny fahatongavan’ny entana eny amin’izy ireo, izay tsy tonga ara-potoana. Eo koa ny karaman’ireo mpibata entana mamindra izany amin’ny fiara hafa noho izay lalana tapaka izay. Tonga eto Antananarivo anefa ireo PPN, dia mahatsiaro ho matiatoka ireo mpambongady raha tsy mampiakatra ny vidiny. Tsy maintsy mampiakatra kosa ireo grosista, hoy ny fanazavana. Mitaraina kosa anefa ireo mpanijara, satria, lasa nidangana ny vidin’ny menaka novidiana. Raha valo alina ariary ny 20 litatra, dia lasa 12.500 ariary izany amin’izao, hoy ireo mpanijara. Voatery nampiakatra 200 ariary ka hatramin’ny 500 ariary amin’ny litatry ny menaka kosa ireo mpivarotra enta-madinika. Ny menaka no nahitana fisondrotany hatreto, satria raha nivarotra 5000 ariary ny litatra, dia lasa 5200 ariary ka hatramin’ny 5500 ariary ireo mpivarotra madinika. Nahitana fiakarany 100 ariary isaky ny kilao kosa ny vary, ka ny makaliaoka raha 1700 ariary ny kilao dia lasa 1800 ariary izany. Ny makalioka sy ny vary gasy no tena be mpividy. Amin’ny ankapobeny, dia mitaraina amin’ny fiakaran’ny vidin’ny PPN ireo mpajifa, ka tokony ho jerena akaiky ny momba izany, fa tsy ho variana amin’ny fandraisana ny vahiny (ndlr : Papa François) ny fitondrana sy ny ministra voakasika, hoy ireo mpajifa sy ireo mpambongady ary ny mpanijara.